Izindlela kanye into umthetho lobugebengu
Okwakushiwo yokuqala welithi "umthetho lobugebengu", layo umsuka ososayensi ukuchaza ngezindlela ezahlukene. Nokho, abacwaningi ukwabelana nombono ovamile ku izingxenye ezimbili eziyinhloko: nomqondo ubugebengu kanye nesijeziso. Emphakathini wanamuhla, lokhu mkhuba inezincazelo eziningi: kuthathwa njengoba igatsha komthetho kanye nomthetho, njengoba isiqondiso isayensi njengoba isiyalo ngokwesayensi. Nokho, lo mbono isetshenziswa ngomqondo olunembile kunazo - uhlelo komthetho ophathelene nokwelelesa, amiswa yisishayamthetho ukuphathwa nokuvikelwa umphakathi yokulwa nobugebengu.
Izici izinhlobo nobudlelwane bokuhlalisana ukuthi kukhona isisekelo sokuhlukanisa isimiso somthetho ku subsystems, injongo yabo yezenhlalo, kanye nezinselelo ezibhekene ke kuvula ukuchaza ngokugcwele umqondo. indlela Isifundo komthetho ophathelene nokwelelesa siwenze legatsha ezimele, okuyinto eduze zithandelana nezinye izindawo. Uhlukanisa ezimbili ngendlela yakhe isiqondiso, okuyinto kunqunywa indlela yomthetho. Lo mqondo kuhlanganisa isihloko lobugebengu Ukuvikelwa umthetho futhi kungekho mithetho elandelwayo. Linomqondo imihlola okuyinto avikelekile futhi kulawulwa yimithetho futhi ziphenywe ngaphakathi kwemingcele ethile.
Isihloko umthetho lobugebengu kule mkhakha nobudlelwane bokuhlalisana ngokuqondile ahlobene ekuqinisekiseni izimo zokuphila ezivamile ngabanye kanye nomphakathi wonkana. Kulo mongo, kwezinkambiso ukusungula miphumela abayizakhamuzi i yokungena ku-Public Relations.
isiqondiso Criminal zomthetho daba usebenzisa izinhlobo ezimbili ubudlelwano:
ukuthi kuphakama lapho ieala phakathi komuntu ngilifeze, futhi isimo emelelwa ejensi wokukatelela ngomthetho;
okuyinto kuwumphumela izenzo kuvunyelwa umthetho, ukulimala ukuba izinto. Abakwazi ngakususi nge imisebenti yebugebengu (isib, eziphuthumayo).
Isihloko umthetho lobugebengu kule ucwaningo ngumqondo ebanzi. Lokhu kungenxa yokuthi isayensi akusho ukufunda kuphela umtsetfo lokhona kanye umkhuba isicelo yayo, kodwa futhi okuqukethwe kwezenhlalo, izindlela zokuthuthukisa imboni wonkana, noma izikhungo zayo ngazinye. Ngakho-ke, lolu cwaningo kukhonjelwe isipiliyoni, esebenzisa elakhiwa lonke uhlelo lomthetho lobugebengu. Kuhlanganisa ukubukwa basekhaya nabamazwe angaphandle lezazi odokotela, kanye international nokubambisana isipiliyoni.
Njengengxenye isiyalo zemfundo isihloko umthetho lobugebengu kunqunywa ngokuphelela kwawo wonke umzimba yolwazi ezivumela ukuba bathole ulwazi theory kanye amakhono athile ochwepheshe esizayo.
umthetho Criminal (njengenhlangano umkhakha) has isihloko yayo hhayi kuphela, kodwa futhi izindlela zabo kwethonya ukuziphatha abaphehla isenzo lobugebengu. Ngosizo lwabo, okuyixazululayo izinkinga ezihlobene nemithethonqubo kanye nokuvikelwa ubudlelwane emphakathini. Izindlela kunazo owaziwa:
Ban ku isenzo esiyingozi ngaphansi usongo we violator izinyathelo elawula.
Ukusetshenziswa unswinyo ebekiwe izenzo zomthetho.
Ukusetshenziswa kwezinye izindlela (isib yezokwelapha).
Ngakho, isihloko umthetho lobugebengu uchaza ubudlelwane zomphakathi asathuthuka kwenkululeko iziqondiso ugunyaza. Basuke ongenakuzihlukanisa kuya izindlela okuxazulula yokuziphatha abalulekile emphakathini yezakhamuzi emphakathini.
Umthetho Case njengoba isisekelo sokwahlulela
Sezombusazwe Ukrainian nosomabhizinisi Yevgeny Chervonenko: Biography, umndeni, umsebenzi
Harvey Bullock - linda "Ubutha '
Ukubhula ngosuku olwandulela uKhisimusi - indlela kuphela lokubheka isikhathi esizayo
Porter matrix isibonelo inhlangano
Dandelion impande: izakhiwo ewusizo izitshalo